imtixaanka TOEFL The | khayraadka Education ka USAHello | USAHello
imtixaanka TOEFL The
Inaad isku deyeyso inaad shaqo hesho ama galaan jaamacadaha? laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u muujiyaan aad ku hadli karin Ingiriis. Gudubto imtixaanka TOEFL ee daliil waxaad la hadli kartaa, qori oo si fiican u fahmi karin luqadda Ingiriisiga. Baro sida in ay qaataan imtixaanka.
Waa maxay baaritaanka TOEFL ah?
TOEFL u taagan tahay Test of English Language sida Dibadda a. baaritaanka muujiyo aad xirfad ku hadlaya, reading, qoraal iyo dhegaysiga Ingiriisi. Haddii aad gudubto imtixaanka la score fiican, waxa uu muujinayaa in jaamacadaha waxaad awood u qaataan koorsooyin kuliyadeed in English noqon doonaa. Waxaa sheegayaa loo shaqeeyayaasha iyo saraakiisha dawladda in aad Ingiriisi waa wanaagsan yahay. Waa baaritaan ugu aqbalay Ingiriisi dunida oo dhan.
Waa maxay sababta aan qaadan imtixaanka TOEFL ah?
Waa maxay nooca imtixaanka waa?
Baaritaanku wuxuu leedahay afar qeybood: reading, dhegaysiga hadalka iyo qorista. Waxay qaadataa oo ku saabsan 3 saacadood. Laga soo bilaabo August 1, 2019, jeer waa:
Reading: 54-72 daqiiqo
Dhagaysi: 41-57 daqiiqo
Isagoo ka hadlayay: 17 daqiiqo
Qoraalka: 50 daqiiqo
Waxaad u baahan doontaa in ay tagaan xarunta imtixaanka si aad u qaadato imtixaanka. Waxaad haysan doontaa in ay isticmaalaan computer ah.
Qaybaha ayaa waxaa si gooni gooni ah u dhaliyay. Haddii aad ku guul dareysato qaybta ama aadan ku faraxsanayn aad score, mar kale oo aad qaadi karto imtixaanka. Haddii aad baaritaanka ka badan hal mar qaadan muddo laba sanno, waxaad isticmaali kartaa adiga oo natiijada ugu wanaagsan ee qayb kasta sida score final aad.
Sidee baan u qaado imtixaanka TOEFL ah?
aad Haddii ay hore u qabaan xirfado wanaagsan Ingiriisi, waxaad u baahan doontaa inaad wax ka barato si aad imtixaanka. Waxaad ka heli kartaa xarunta jirrabaya in idiin khayr. Markaas waxaad iska diiwaan gelin kartaa in ay qaataan imtixaanka.
Ma rabtaa in aad si aad u barato Ingiriisi guriga ama qalab mobile? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan fasallada Ingiriisiga online lacag la'aan ah iyo barnaamijyada moobiilllada waxaannu aragnay in.
Ma rabtaa in aad qaadato fasalka? Raadi ee FindHello si aad u hesho fasal free Ingiriisi kuu dhow. Waxaad ku qortaa magaalada ama cinwaanka, ka dibna dooro “Fasalada Waxbarashada iyo Ingiriisi.” Waxaad sidoo kale u tagi kartaa xaafaddaada maktabadda, xarunta bulshada, ama xarunta shaqada oo weydii haddii ay fasalada free dalab Ingiriisi.
Waxaad ka heli kartaa xarunta beesha by baadhi online. Ku qor magaca magaalada oo ah xaafad ka dibna erayada “xarunta bulshada.”
ETS waa adeeg imtixaanka in waddaa baaritaanka TOEFL ah. Rasmiga ah website ETS dalabyo khayraadka si ay kuu caawiyaan waxbarasho ee aad imtixaanka. Qaar badan oo ka mid ah ilaha ugu waa lacag la'aan, laakiin qaar ka mid ma aha kuwo.
lammaanahaaga USAHello ee Global Ingiriisi bixisaa Imtixaanka TOEFL online. Haddii aad diiwaan Global Ingiriisi dhex USAHello, waxaad ka heli doontaa lacag la'aan ah si ay imtixaanka barbaradka ah iyo fasalo helitaanka.
Raadi xaruntaada jirrabaya TOEFL
Liisaska sidoo kale website ETS xarumaha imtixaanka ee USA iyo dalal kale. Ka dib marka aad doorato xarunta imtixaanka, website-ka ku tusi doona taariikhaha kaas oo aad u qaadan kartaa imtixaanka xarunta in.
Diiwaan imtixaanka TOEFL ah
Waxaad ma ballansan kartaa baaritaanka ilaa aad iska diiwaan online. Waxaad u baahan doontaa inaad abuuraan xisaab la ETS, TOEFL adeegga jirrabaya.
fasalada Free online la USAHello